Railroad Vana Boka Vakaunganidzwa paCamlik Train Museum - RayHaber
mushaTURKEYTurkish Aegean Coast09 AydinRailroad Vana Boka Vakaunganidzwa paCamlik Train Museum
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 09 Aydin, Railway, Turkish Aegean Coast, PHOTOS, GENERAL, musoro wenyaya, TURKEY 0
boka rezvitima revana rakasangana kumusamu chitima musamu
nhengo Turkey akawanda Demiryolc Children Group kubva mumatunhu akawanda, guta Selcuk Aydin akasangana pachiteshi miziyamu muguta summerhouse.
Vanenge vanhu ve200 muRailroad Vana Group, yavakaumba pama media enhau, vakasangana ku Çamlık Steam Locomotive Museum ndokutora maficha e-souvenir aine locomotives uko madzibaba avo nemadzimai avo vakashanda nezve 40 makore apfuura.
Vanhu ve200 vanobva kumatunhu eAfyonkarahisar, İzmir, Uşak, Zonguldak, Konya naKayseri vakapinda mumusangano wekudya kwemangwanani wakarongedzwa nevavambi veboka Serkan Basavul neshamwari dzake. Anenge makore 40 apfuura, vatori vechikamu vakaudza nyaya dzavo kune mumwe nemumwe kuti ivo vakakura pakati pezvitima pane chiteshi chekugara. Kuzorodza ndangariro dzenhengo dzeboka, dzimwe nguva kukonzera nguva dzemanzwiro. Maneja weboka, Serkan Basavul akati mune chirevo: "Takasimbisa boka iri kuti baba vavo, madzimai, pamudyandigere, Vakafa Railway Vana Mapoka vaungane nguva nenguva." Nekuti njanji rudo, basa rinoda chibayiro. Baba vavo pavaishanda munzvimbo dziri kure dzeAnatolia, idzi shamwari dzakakura dzichisangana nematambudziko iwawo muzviteshi izvozvo uye vaive nezvinetso zvechikoro. Vaigara munzvimbo dzekugara munzvimbo dzaipisa nguva yechando. Nyaya yehupenyu yeumwe neumwe akasiyana. Tinosangana kakawanda pagore, uye tinofara. ”
Nzira Yezvifambiso Nhoroondo: Upenyu Hwakadzikama 08 / 05 / 2013 Upenyu Hwakadzikama Kana mangwanani achiedza, kutonhora kunotanga nguva yakawanda pakati pematare esimbi. Chikamu chakaendeswa kumakiromita 20 zuva nezuva kusvikira manheru. Inzira iyi inodzivirira munzvimbo dzakawanda dzine 10-15 km zvikamu. Mufambi wechitima anotarisa nzvimbo yaanoita zuva rimwe nerimwe ane matanho makuru, anofanira kutarisa kuchengetwa. Mustafa Dogan (1975), uyo akatanga kushanda semushandi mu State Railways (FDY) mu57, akanga ari mumwe wevashandi vefodya. Kwemakore makumi maviri, 85 akafamba makiromita chiuru kuti atarisire nzvimbo yaaive ari kutarisira, asi kaviri zvakakwana kuti aende pasi pose. Asik Veysel "Ndiri mumugwagwa wakatetepa, ndiri kuenda masikati nousiku", sokuti kana achiti, ...
TCDD nemotokari Train Trainers Vanosangana Mukukurukurirana Musangano 22 / 04 / 2019 Turkish State Railways TCDD General Directorate of Transport uye njanji chitima dzaishandisa vaisangana kubvunzana mumusangano mukamuri. TCDD Musangano General Director Ali Ihsan zvakakodzera, Vice TCDD General Director Ismail H. Murtazaoğlu, TCDD Transportation General Manager Erol Arikan, TCDD Transportation Deputy Director General Cetin Altun, Railway Transport Association Director General Yasar nzira uye akabatana Kushandisa Director of private nemauto mubasa njanji kuvhiyiwa of Company. Improvement pakati njanji kwacho uye kusvitsa kunyatsoongorora matambudziko kubudikidza wekuongorora zviri nemauto, TCDD General Director Ali Ihsan Vatungamiri ane zvakakodzera. "Zvose dambudziko rako Contact Munhu Mumwe Wedu" Zvakakodzera Kufambisa pamwe TCDD Railway chitima dzaishandisa ...
Nhasi munhoroondo: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum Yakazarurwa 02 / 08 / 2015 Nhasi, 2 August 1914 yakasimbiswa sekusungirirana kwevanhu vazhinji, uye ipapo General Directorate ye Railroad Railways yakatora matairi eFrance neBritain. Makambani eGermany neAustria akapfuurira. Hicaz Railway zvakare yakanga iri pasi pekutonga kwemauto. Munguva yehondo, motokari yacho yakavhara kutakura kwekutakura uye hufambi hahukwanisi kuitwa. 2 August 1944 Mutemo Nha. 20 pamakero emamiriyoni e4643 ekuvakwa kwezvitima kusvika kuIraq uye muganhu weIran. 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum yakasununguka.
Çamlık Steam Locomotive Museum (Video uye Mufananidzo) 01 / 12 / 2012 Summerhouse Steam locomotive Museum iri miziyamu muna Selcuk vanoda nezvitima uye chitima modelers mumugwagwa (Izmir) pashure yako nzira kumusoro kuburikidza nemipaini Ashera pamusoro xnumxkm musha. Tapinda musha kurudyi pamusoro mugwagwa pasi zvinyoronyoro gradient TCDD veteraani hwemvura locomotive kuti vakaunganidza summerhouse Steam locomotive Museum 'unogona kuona zviratidzo. Pakutanga kujeka mukati uye kunze pamukova miziyamu akawanda zvisingaoneki divi mumugwagwa, kwete munzira huru. Kusiyana nokufungidzira kwangu, nzvimbo yakachengetedzwa uye inofadza yakagadzirirwa, yakasvibirira kumativi ose. Mu musimamende, kunyanya yezvikepe zvekare zvechikepe, ngoro, makanhire Müz
Nhasi munhoroondo: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum yakavhurwa. 02 / 08 / 2013 Nhasi, 2 August 1914 yakasimbiswa sekusungirirana kwevanhu vazhinji, uye ipapo General Directorate ye Railroad Railways yakatora matairi eFrance neBritain. Makambani eGermany neAustria akapfuurira. Hicaz Railway zvakare yakanga iri pasi pekutonga kwemauto. Munguva yehondo, motokari yacho yakavhara kutakura kwekutakura uye hufambi hahukwanisi kuitwa. 2 1944 20 4643 mutemo wekodzero yemamiriyoni e2 ekuvakwa kwezvitima kusvikira kuIraq uye muganhu weIran. 1991 August XNUMX Çamlık Steam Locomotive Museum yakasununguka.
Nhasi munhoroondo: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum Yakazarurwa
Çamlık Steam Locomotive Museum (Video uye Mufananidzo)
Nhasi munhoroondo: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum yakavhurwa.
Kufarira kukuru kune Çamlık Open-Air Locomotive Museum
Nhasi munhoroondo: 2 August 1991 Camlik Steam Locomotive Museum ...
Nhasi munhoroondo: 2 August 1991 Çamlık Steam Locomotive Museum